Antonio Machado. Mitsara makumi matatu. Chiitiko chekufa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo waAntonio Machado naJoaquín Sorolla. 1918.
Antonio Machado afa nhasi muna 1939 mukutapwa kweFrance kweCollioure. Mumiriri we Mazuva ano uye izvo Chizvarwa che98, aive - uye achiri - imwe yeanonyanya kukosha uye ane mbiri mazwi enhetembo yenyika yedu. Mundima dzake, dzatakaverenga tese pane dzimwe nguva, akadzidzira kubva pa rudola chitenderola kushoropodzwa kwevanhu uye zvematongerwo enyika and the Hunhu hwevanhu nezvose zvinopesana. Iyo nguva inopfuura, kunzwa kana the Chokwadi y kuratidzira kuSpain yenguva yayo variwo mubasa rake uye ramba uchishanda pari zvino. Nhasi ndinosarudza Makumi matatu emitsara yake kurangarira.
30 mitsara naAntonio Machado
Nyanduri, mutambi wenhau uye murondedzeri wenhau, pakati pemabasa ake ane mukurumbira ndeaya: theatre, uya akanyora nehama yake Manuel, ine mazita akadai Njodzi dzehupfumi, MaDuchess eBenamejí o La Lola anoenda kuzviteshi. Uye mukati verso, anonyanya kuzivikanwa Solitudes o Minda yeCastile.
Walker, hapana nzira, nzira inoitwa nekufamba.
Vanoti murume haasi murume kusvikira anzwa zita rake kubva pamuromo wemukadzi.
Mumoyo make aive aine munzwa wekuda. Ini ndakakwanisa kuibvarura zuva rimwe: Ini handichanzwi moyo wangu.
Ndakafunga moto wangu wadzimwa, ndikamutsa madota… ndakapisa zvigunwe zvangu.
Ini ndakarota - kukanganisa kukuru! - kuti ndaive nemukoko pano mukati memoyo wangu. Uye nyuchi dzegoridhe dzaigadzira mazamu machena neuchi hunotapira kubva mukukundikana kwangu kwakare.
Patakatanga kuonana, hapana zvatakaita kunze kwekuzviyeuchidza isu. Kunyangwe zvingaratidzika sezvisina musoro kwauri, ndakachema apo ini ndaiziva nezverudo rwangu kwauri, nekusakuda iwe hupenyu hwangu hwese.
Ziso raunoona harisi ziso nekuti iwe uriona, iziso nekuti rinokuona.
Ichokwadi ndicho zvazviri, uye zvinoramba zviri zvechokwadi kunyangwe iwe uchifunga kumashure.
Wati hafu yezvokwadi here? Vachati unonyepa kaviri kana ukaudza imwe hafu.
Mushure mechokwadi hapana chinhu chakanakisa senge ngano.
Mukusurukirwa kwangu ndakaona zvinhu zvakajeka chaizvo zvisiri zvechokwadi.
Tichifunga sarudzo pakati pechokwadi nemufaro wekuchitsvaga, tinosarudza chekupedzisira.
Zvakaipisisa pane kuona nhema nhema kusiri kuzviona.
Mushure mekurarama uye kurota ndizvo zvinonyanya kukosha: kumuka.
Zvese izvo zvinofuratirwa, kuzvidzwa.
Anononoka uye akanaka mazwi, kuti kuita zvinhu mushe, zvinonyanya kukosha pane kuzviita.
Nhasi kunogara kwakanyarara.
Varume veSpain, kana zvakapfuura hazvina kufa kana mangwana, kana nezuro, zvakanyorwa.
Pese pandinobata nevarume vanobva kuminda, ndinofunga nezvekuti vanoziva zvakadii uye isu tinofuratira, uye kuti zvidiki sei kwavari kuti vazive kuwanda kwatinoziva.
MuSpain, kunze kwemisoro gumi, mapfumbamwe kurwisa uye mumwe anofunga.
Mudiki wechiSpanish anouya munyika, Mwari vakununure, rimwe revaSpain vaviri rinofanira kutonhora moyo wako.
Mune zvematongerwo enyika, chete avo vanoisa kenduru panofurwa nemhepo kukunda; hapana anoda kumbofurwa nemhepo kwaanoisa kenduru.
Kuti utaure, tanga wabvunza; gare gare ... teerera.
Hapana munhu anofanira kutya zvavanofunga, kunyangwe kana kufunga kwavo kuchiratidzika kunge kunopesana nemitemo yepakutanga yemafungiro.
Kune izvo zvinonzi nevanhu runako, kururamisira uye runako, imwe hafu igodo, uye imwe haisi rudo.
Hazvina mhosva kuti murume akakosha zvakadii, haambove akakosha kupfuura iyo yekuve murume.
Ini ndinozvidza rudo rwevanyengeri uye korasi yekiriketi inoimba kumwedzi. Kuti ndisiyane ndinomira manzwi emaungira, uye ini ndinongonzwa, pakati pemanzwi, imwe.
Akakomborerwa iye anokanganwa chikonzero cherwendo uye, mune nyeredzi, mumaruva, mumakore, anosiya mweya wake mumoto.
Icho chakanakisa chechakanaka ndiani anoziva kuti muhupenyu huno zvese inyaya yekuyera: zvishoma zvishoma, zvishoma zvishoma ...
Akanaka ndiye anochengeta, sekutengeswa kwemugwagwa, kune vane nyota mvura, uye chidhakwa waini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Antonio Machado. Mitsara makumi matatu. Chirangaridzo cherufu rwake
Antonio Machado akadaro
Zvingave zvainyanya kufadza uye kubatsira kuti titore zvinyorwa izvo zvinobva zvirevo. Kune izvo ini ndinotsvaga makumi matatu emitsara yeMachado muWikipedia uye ndizvozvo.
Pindura kuna Antonio Machado